I-Apple iya kuhlawula iQualcomm engekho ngaphantsi kwe- $ 4,500 yezigidigidi | I-Androidsis
Uxolo oluxabisekileyo: I-Apple iya kuhlawula iQualcomm engekho ngaphantsi kwe- $ 4,500 yezigidigidi
Kanye xa besicinga ukuba umlo osemthethweni phakathi kweApple neQualcomm uza kudonsa ixesha elide, zombini iinkampani ngequbuliso zabhengeza ukuba kufikelelwe kwisivumelwano.
Kwikota yakho yesibini yokuqikelela ingeniso, I-Qualcomm ityhile ukuba iya kufumana ubuncinci i-4,500 yezigidigidi zeedola kwi-Apple, njengenxalenye yesivumelwano soxolelwaniso phakathi kweenkampani. Luhlobo lokuxolisa oluvela kuApple, kwaye kuyabiza nako.
Isivumelwano phakathi kweApple neQualcomm yaba sisenzo esimangalisayo esaphuma esikhepheni kwimpikiswano phakathi kwezi ngxilimbela zimbini zobugcisa.
Njengoko kubonisiwe yingxelo yeBloomberg, uApple wayegqibile ukuba iimodem zeIntel (ezazisetyenziswa nguApple mva nje ngenxa yedabi lakhe neQualcomm) ngekhe zilungele ngexesha le5G iPhone, yiyo loo nto inyanzele iApple ukuba yamkele Intlawulo ephakathi kwe-4.5 kunye ne-4.7 yezigidigidi zeedola ukubuyekeza iQualcomm.
Esi sixa-mali sesesivumelwano kuphelanjengoko iApple izakuqhubeka nokuhlawula imirhumo ngokusetyenziswa kwemodem yeQualcomm kuso nasiphi na isixhobo sayo kwixa elizayo.
Ngokuphathelele iApple, iibhiliyoni zayo zithenge umbutho iminyaka emithandathu yesivumelwano selungelo elilodwa lomenzi kunye neQualcomm, benokhetho lokuyandisa iminyaka emibini emva koko. Oku kuyatywina ngokufanelekileyo amadabi asemthethweni kunye ne-chipmaker.
I-Snapdragon 865 iya kuxhasa i-Qualcomm entsha ye-HDR10 + esemgangathweni
Eyona nto iphambili ku-Apple, inikwe ukuba ngokurhoxa kwe-Intel kwimarike yeemodem ze5G zeefowuni, iQualcomm yeyona nto inokuphela okwangoku. Esi sesona sizathu sokuba iApple ikhethe ukuhlala ngaphandle kwenkundla, njengoko inezinto zokuthatha ityala kude kube sekupheleni.
Isixa-mali esikhutshwa ngu-Apple asizukuyenza nto eyonzakalisa inkampani, njengoko kuxeliwe oko Inkampani ine- $ 225.4 yezigidigidi zemali esandleni, thabatha ezinye iiasethi zakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Uxolo oluxabisekileyo: I-Apple iya kuhlawula iQualcomm engekho ngaphantsi kwe- $ 4,500 yezigidigidi
Kuya kufuneka ube nguwe wedwa ongakhange uziqonde iindaba okanye ungumntu othanda umfana okhetha ukuyenza inkohliso ...
Ukuhlawulwa kwaloo mali koko iApple ikweleta iQualcomm kuba ngexesha lokuvavanywa kwenqabile ukuqhubeka nokuhlawula. Ulihlawule nje ityala oko kwaqala ityala likaHadda ngoku. ASISISIVUMELWANO kwezoqoqosho, yintlawulo yento osamtyala yona ngokusemthethweni nangaphezulu
I-IDC iya kuhlaziya amanani okuthunyelwa kukaXiaomi kwiQ2019 XNUMX kwiveki ezayo
Isamsung iyangqina ukuba isebenza kwiikhamera ezidityanisiweyo phantsi kwezikrini